२०७७ असोज २४, शनिबार | eAdarsha.com
२०७७ असोज २४, शनिबार
नयाँ मित्र बनाइनेछ । मन मिल्ने व्यक्तिसँगको जम्काभेटले रमाइलो माहोल बन्नेछ । काम गरेर आत्मसन्तोष मिल्नेछ । छोटो रमाइलो यात्राको संभावना बलियो रहेको छ । साँझपख स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ ।
सामाजिक कार्यबाट सम्मान पाइनेछ । सानातिना समस्याले छाड्ने छैनन् । पूर्व तयारीका साथ कार्य गर्दा समस्यालाई समाधान गर्न सकिनेछ । कुटुम्बको साथ सहयोग मिल्नेछ । अचल सम्पत्ति जोडिने छ ।
कामप्रतिको लगनशिलता बढेर जानेछ । बोलिको प्रभाव रहनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । विशिष्ट समारोहमा अतिथिको सत्कार पाइनेछ । मानसिक क्षमताको प्रशंसा हुनेछ । खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ ।
अनावश्यक कार्यमा समय वित्नेछ । शत्रू भेदले सताउनेछ । थालेका कार्यले सही रुपमा स्थान पाउने छैनन् । नयाँ आर्थिक लगानिले समस्याको सृजना हुनेछ । उत्तराद्र्धको समयमा समस्याहरु हल हुनेछन् ।
अघिदेखिको परिश्रमको फल ग्रहण गर्न पाइनेछ । व्यापार व्यवसायबाट सोचे अनुरुप लाभ मिल्नेछ । सहयोगीहरुको साथ समर्थनले गर्दा नयाँ कार्यको आरम्भ हुनेछ । वेलुकी पख एक्कासी समस्या आइलाग्नेछ ।
नयाँ कार्यको प्रस्ताव आउनेछ । पूराना समस्यालाई हल गर्दै नयाँ कार्य योजना रचिने छ । सोच्न सक्ने क्षमताको विकास हुनेछ । उच्चस्तरका व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ । व्यवसायबाट सन्तोषजनक लाभ मिल्नेछ ।
विपक्षीहरु पनि सहयोगमा जुट्ने छन् । रोकिएका कार्यलाई पहल गर्दा बन्ने छन् । समाज सेवामा मन रमाउनेछ । साकारात्मक सोच विचारको उदय हुनेछ । काम प्रतिको लगनशिलता बढेर जानेछ ।
पारिवारिक समस्याले गर्दा कार्य गर्ने वातावरण बन्ने छैन । मनमा शंका उपशंका उब्जनेछ । सोचे अनुरुप कार्य नबन्दा नैराश्यता छाउनेछ । ठूलो लगानि उचित देखिन्न । दैनिकीमा नै व्यस्थ रहनु होला ।
नेतृत्व गणसँग घनिष्ठता रहनेछ । कलात्मक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । श्रृङ्गारिक कार्यमा मन जानेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार हुनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो नै रहनेछ । वेलुकी पख विपक्षीले दुःख दिनेछन् ।
व्यापार व्यवसायबाट अनपेक्षित लाभ मिल्नेछ । नयाँ नयाँ प्रस्तावहरु आउने छन् । कामको सन्दर्भमा यात्रा हुनेछ । प्रशासनिक क्षेत्रका अपूरा कार्यलाई पहल गर्दा बन्ने छन् । श्रमको सही मूल्यांकन मिल्नेछ ।
नयाँ ज्ञान ग्रहण गर्न पाइनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा नतिजा सकारात्मक आउँदा हर्ष बढ्नेछ । धेरै व्यक्तिसँग सम्पर्क बढ्नेछ । पारिवारिक समस्या हल हुनेछ । नयाँ योजना रचिनेछ । स्वास्थ्यको भने ख्याल राख्नुहोला ।
अवसर हुँदाहुँदै पनि विकल्पको बाटो रोज्नाले समस्यामा परिनेछ । आफन्तजनसँगको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । सामान्य कार्यलाई पनि धेरै समय खर्च गर्नु पर्नेछ । तर उत्तराद्र्धको समयमा समस्या सुल्झनेछ ।
वि.सं. २०७७ साल असोज २४ गते शनिबार, तदनुसार ई.सं. २०२० अक्टोबर १० तारिख, प्रमादीनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, शरदऋतु, चान्द्रमान अनुसार अधिक आश्विनकृष्णपक्षको अष्टमी तिथि दिवा १२ः४१ बजेसम्म, त्यसपछि नवमी तिथि रहनेछ ।
नक्षत्र पुनर्वसू वेलुका ९ः१० बजेसम्म, त्यसपछि तिष्य रहनेछ ।
विष्कुंभादी योग शिव वेलुका ९ः३९ बजेसम्म, त्यसपछि सिद्ध रहनेछ ।
आनन्दादी योग छत्र ।
करण तैतिल रात्रि १२ः३२ बजेसम्म, त्यसपछि वणिक् रहनेछ ।
श्रीसूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा : मिथुन राशिमा दिवा ३ः०५ बजेसम्म रहनेछ ।
सूर्योदय ६ः०२ बजे, सूर्यास्त : बेलुका ५ः३८ बजे ।